हो! तपाई जीवनमा केही बन्न सक्नुहुन्छ । | प्रेरक संसार
हो! तपाई जीवनमा केही बन्न सक्नुहुन्छ ।
- जब बजारमा साग बेच्ने केटा विख्यात वैज्ञानिक थोम एडिसन बन्न सक्छ भने । - पेट्रोल पम्पमा काम गर्ने कुल्ली धनाढ्य धिरूभाइ अम्बानी बन्न स...
- जब बजारमा साग बेच्ने केटा विख्यात वैज्ञानिक थोम एडिसन बन्न सक्छ भने ।
- पेट्रोल पम्पमा काम गर्ने कुल्ली धनाढ्य धिरूभाइ अम्बानी बन्न सक्छ भने ।
- ट्रक चलाउने ड्राइभर विख्यात गायक एल्विस प्रिस्ले बन्न सक्छ भने ।
- एउटा गाडीको खलासी सुपरस्टार रजनिकान्त बन्न सक्छ भने ।
- कलेज ड्रप आउट युवा स्टिभ जब्स बन्न सक्छ भने ।
- कसैको घरेलु नोकर विख्यात साहित्यकार म्याक्सिम गोर्की बन्न सक्छ भने ।
... किन तपाई मात्र अपवाद बन्ने । आजको स्थिती जस्तो सुकै विषम भए पनि, कसैले छेक्न सक्दैन, तपाई पनि महान् बन्न सक्नुहुन्छ, विख्यात बन्न सक्नुहुन्छ । तपाई माथी उठ्न सक्नुहुन्छ, त्यो उचाइ छुन सक्नुहुन्छ । बस्, आफ्नो हृदयमा त्यो विश्वास भर्नुस्, आफूमा विश्वास राख्नुस्, अघि बढ्नुस्, इतिहास साक्षि छ....हो तपाई जीवनमा केही बन्न सक्नुहुन्छ ।
-- गर्नुस् श्यर, फैलाउनुस् यो वास्तविकतालाई --
प्रेरक संसार: हो! तपाई जीवनमा केही बन्न सक्नुहुन्छ ।